Turkiga iyo Sacuudiga oo ka wada hadlay xoojinta xidhiidhka labada dal. | Dhaymoole News
Turkiga iyo Sacuudiga oo ka wada hadlay xoojinta xidhiidhka labada dal.
Hargeysa (Dhaymoole) Madaxweynaha Turkiga Racip Tayip Erdogan oo kulan la yeeshay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya wuxuu sheegay inuu doonayo in la soo celiyo iskaashiga dhaqaale ee labada dal u dhaxeeyoey.
Erdogan wuxuu sheegay Ankara iyo Riyadh labaduba inay ka go’an tahay inay wanaajiyeen xidhiidhkooda sannadihi u dambeeyey xumaa.
Erdogan oo booqashadi uu ku joogay Sacuudiga soo gaba’gabeeyey oo warfidiyeennada la hadlay xilli uu diyaarad sii saarnaa wuxuu sheegay labada dhinac inay isku afgarteen inay ka wada shaqeeyaan danaha ay ka mideysan yihiin iyo amniga gobolka.
Booqashada labada maalmood uu Erdogan ku joogay Sacuudi Carabiya wuxuu kulammo uu la qaatay Boqorka Sacuudiga Salmaan Bin Cabdilcaziiz, dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan iyo mas’uuliyiin kale.
Xidhiidhka labada waddan ayaa xumaa tan iyo markii sannadkii 2018-kii gudaha qunsuliyada dalka Sacuudiga ee Turkiga lagu dilay Wariye Jamaal Khashoggi.